Shiinaha Oxygen Concentrator ANGEL-5S warshad iyo soosaarayaasha | AngelBiss
Farsamada & Adeegga
Ogsijiin Isku-urursiga 'ANGEL-5S'
Mashiinka Korantada Korantada (weelka mataanaha ah)
DAMBIYAYAASHA GUUD 25
ANGELBISS, Midka ugu horeeya ee diirada saaraya Is beddelka qulqulka oksijiinta, kan ugu horreeya CAN wuxuu xakameyn karaa sicirka qulqulka gudaha 0.1%.
Taxanaha '' ANGEL5S '' waa mid ka mid ah 5L oxygen-ka la qaadi karo oo leh nidaamka digniinta ugu dhameystiran, tilmaam qalad sax ah, iyo waxqabadka ugu xasilloon ee suuqa. Waxay dhaaftay shahaadada CE iyo ISO13485.
1. Taabashadu waxay ku shaqeysaa cutubyo badan oo shaqeynaya.
2.5Liter oo leh 93% ± 3% soosaarka nadiifinta oksijiinta ee loogu talagalay dadka isticmaala COPD
3.Oxygen daahir ahaanta Muuqaal ee Nambarada (Sax ah 00.0%)
5.Large 6 'LED Light Soo Bandhig dhammaan macluumaadka shaqeynaya
Isugeynta wadarta saacadaha socda
Astaamaha gaarka ah waxaa bixiya oo keliya AngelBiss Technology
1.MAYA adduunka. 1 Heerka Nadiifnimada Soosaarka Oxygen ee lagu xakameeyo gudaha 0.1%.
Qoyaanka culus ee otomaatiga ah wuxuu ka saaraa shaandhada molikaliska
Nidaamka soosaarka oksijiinta & nidaamka nebulizer
Dejinta 4.Cold Lock
5.3 sano oo damaanad ah ama 18000hours noloshiisa
6.Waxaa loo isticmaali karaa aagagga deegaanka heerkulkiisu sarreeyo (45ºC), joog sare (15000 fuud).
Codsiga iyo muuqaalka guud ee alaabooyinka ogsijiin ee loo yaqaan 'Angebiss oxygen' ee loo yaqaan 'Angebiss oxygen' ayaa waxay ku siin karaan xalal kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Matoor dhaliyaha yar wuxuu dabooli karaa baahida oksijiinta ee qoysaska ， shaqsiyaadka iyo rugaha yaryar.
Hay'adaha waaweyn ee caafimaadka iyo warshadaha, waxaan siineynaa nidaamyo oksijiin oo dhameystiran, oo loo qaabeeyey, la soo saaray, laguna rakibay goobta iyadoo loo eegayo baaxadda dalabka.
Mashiinka koronto-dhaliyaha ee loo yaqaan 'Angelbiss oxygen' waxaa loo isticmaali karaa beeraha warshadaha, oo ay ku jiraan matoorrada loo yaqaan 'ozone matoorrada', soosaarka muraayadda, aquaculture, daaweynta bullaacadaha, dhalaalida warshadaha, nitrogen iyo kala soocidda oksijiinka, iwm.
Angelbiss waxay ku siin kartaa oksijiin-ururin sare oo joogto ah oo aamin ah xaaladaha kor ku xusan.
Haddii aad wax su'aalo ah naga qabtid, waxaad nagala soo xiriiri kartaa info@angelbisscare.com, shaqaalahayaga adeegga ayaa kula soo xiriiri doona sida ugu dhakhsaha badan.
2. 5Liter oo leh 93%±3% soo saarista nadiifinta oksijiinta ee isticmaalayaasha COPD
3. Muujinta Nadiifnimada Ogsijiinta ee tirooyinka (Sax ah 00.0%)
5. 6 'Laydh Iftiin Ballaaran oo Muujinaya dhammaan xogta shaqeysa
6. Wadarta saacadaha socodka
Noocyada Gaarka ah waxaa bixiya oo keliya shirkadda 'AngelBiss Technology'
1. MAYA adduunka. 1 Heerka Nadiifnimada Soosaarka Oxygen ee lagu xakameeyo gudaha 0.1%.
2. Qoyaan culus oo otomaatig ah ayaa ka qaada shaandhada maadada
3. Nidaamka soo-saarka Oxygen-ka madaxa-bannaan & nebulizer
4. Dejinta qufulka ilmaha
5. 3 sano oo damaanad ah ama 18000hours cimrigooda
6. Isticmaal waara u leh aagagga bey'adda ee heerkulkiisu sarreeyo (45））, joog sare (4500m).
Hordhaca AngelBiss Oxygen
AngelBiss Oxygen Concentrator oo leh hawlgal otomaatig ah, ayaa bixin kara oksijiin saafi ah oo buuxisa heerarka caafimaad ee xarumaha caafimaadka, isbitaalada, iyo bukaanada u baahan inay ku neefsadaan oksijiinta guriga.
Maalmahan, dad badan ayaa la xanuunsanaya wadnaha, sambabka, iyo cudurada kale ee neef mareenka. Dadkan badankood waxay ka faa'iideysan karaan daaweynta oksijiinta ee dheeriga ah, gaar ahaan bukaannada COPD. Isku soo ururaha ogbajiyeyaasha ee loo yaqaan 'AngelBiss oxygen' ayaa bixin kara isha ugu kalsoonida badan, wax ku oolka ah, uguna habboon ee ogsijiinta dheeriga ah maanta.
ANGEL-5 taxanaha xoojiyeyaasha oksijiin ee nadiifka oksijiinku u dhaxeeyo 90% ilaa 96%. Qaab-dhismeedka ugu sarreeya-Angel 5S, oo ay ku jiraan shaqada nebulizer, shaqada qufulka ilmaha, 6 nooc oo ah howlaha digniinta badbaadada, 5 nooc oo ah shaqooyinka tilmaamidda qaladka, ayaa qancin doona baahida macaamiisha kala duwan. Hadda waa badeecada ugu weyn, kugula talin isticmaalka guriga. Waxaan sidoo kale bixinaa nooc leh batteriga la doorto (ANGEL-5SB), oo si joogto ah u socon kara 2 saacadood.
Taxanaha 'ANGEL-5' xitaa wuu ka shaqeyn karaa xaalada heerkulka sare (45 ℃) iyo dabeecada sare (15000FT) .Haddii aad ku sugan tahay meel joog sare leh, taxanaha 'ANGEL-5' ayaa kugu habboon adiga.
Codsiga Iskuxirayaasha Oxygen ee AngelBiss
AngelBiss ayaa hogaamineysa soo saaraha dhamaan qeybaha qulqulka oksijiinta leh teknoolojiyada PSA ee horumarsan ee Shiinaha. AngelBiss waxay ku siin doontaa xalal kala duwan iyadoo loo eegayo baahida kala duwan ee codsiyada macaamiisha.
Baahida loo qabo oksijiinta shaqsi, qoys iyo rugo caafimaad oo yar, AngelBiss xoogsadeyaasha oksijiinta qulqulaya ayaa dabooli doona baahidooda.
Wixii hay'ado caafimaad oo waaweyn iyo warshado, AngelBiss waxay bixin kartaa xirmo dhammaystiran oo nidaamyo wax lagu bixiyo oo oksijiin ah, kuwaas oo loo qaabeeyey, la soo saaray, laguna rakibay goobta loogu talagalay dalabka.
Marka lagu daro codsiyada caafimaadka, iskudhafka oksijiinta ee loo yaqaan 'AngelBiss oxygen' sidoo kale waxaa lagu dabaqi karaa goobaha warshadaha, oo ay kujiraan matoorrada ozone, soosaarka muraayadaha shaqada, beero dhaqashada / kalluunka, daaweynta biyaha wasakhda ah, dhalaalida warshadaha, nitrogen iyo kala soocidda oksijiinta iyo codsiyada kale.
AngelBiss waxay ku siin kartaa il joogto ah oo ammaan ah oksijiin saafi ah oo loogu talagalay xaaladaha kor ku xusan ee kaladuwan ee kaladuwan.
Hore: Mashiinka Korantada Korantada (weelka mataanaha ah)
Xiga: Teknolojiyada Caafimaadka ee AngelBiss
Iskuxiraha Ogsijiinta Daryeelka Guriga
Iskuxiraha Ogsijiinta Guriga
Guriga Adeegso 5L Ogaysiiyaha Ogsijiinta
Guriga Adeegso Iskuxiraha Ogsijiinta
5L Oxygen Isku-xiraha Dib-u-buuxin kara oo leh P Sare ...
AngelBiss Healthcare Inc R2, No.106, Wadada Shuanghe, Magaalada Dianshanhu, 215345, Shanghai, Shiinaha
Daraasada iyo Codsiga Ogsijiinta ...
Ogsijiin waa mid ka mid ah qaybaha hawada. Waa midab la’aan, ur iyo dhadhan midna. Ogsijiin ayaa ka culus hawada. Waxay leedahay cufnaan ah 1.429g / L xaaladaha caadiga ah (0 ° C iyo cadaadiska Hawada 101325 Pa), waana s ...
Ku soo dhowow Carwada 2020 CMEF Shanghai AngelBiss. Waxaan joognaa 10.19 ~ 10.22.
Sarkaalka WHO wuxuu yiri oksijiinku waa ...
“Mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee nolosha looga badbaadiyo COVID-19 ayaa ah bixinta oksijiinta bukaannada u baahan. WHO waxay ku qiyaaseysaa in heerka hadda ee ~ 1 milyan oo kiisas cusub ah usbuucii, adduunku u baahan yahay qiyaastii 620,000 cu ...
Teknoolojiyadda No.1-In ka badan 18 diiwaangelinta rukhsadaha cusub ee isku-duwaha oksijiinta iyo mashiinka nuugista No.2-Batariga ugu horreeya adduunka ee dib u soo celiya 5L Oxygen Concentrator wuxuu gaarayaa 93% No.3-Tijaabinta 5L oxygen concentrator ee Tibet 15000f ...
Hambalyo AngelBiss for Obtainin ...
Dhawaan, AngelBiss waxay heshay laba shati oo nooca korontada loo adeegsado ah oo uu idman yahay Xafiiska Hantida Maskaxda ee Shiinaha. Shahaadooyinka cusub ee la helay markan waxay si buuxda uga tarjumayaan awoodda iyo awoodda hal-abuurnimada ee AngelBiss ...
AngelBiss 2020 Cilmi-baarista Alaabada Cusub Iyo ...
AngelBiss wuxuu diiradda saaraa tayada wax soo saarka iyo ikhtiraaca farsamada markasta. Xaaladda adag ee dhaqaale xumida adduunka, AngelBiss weli waxay ku sii socotaa xawaare horumarineed oo wanaagsan, shirkadduna waxay leedahay ...
Qorshaha Bandhigyada ee AngelBiss sanadka 2020
ANGELBISS, oo ah soo saaraha xirfadlaha ah ee Iskuxirka Caafimaadka Oxygen iyo Mashiinka Mashiinka La qaadan karo ee Shiinaha, wuxuu noqon doonaa soo-bandhigaha Bandhigyada soo socda: Ipoh Malaysia Apri, 2020 Milan Italy May, 2020 CMEF Shanghai 2020 ...